Oduu Gaddaa!!Koloneel Gammachuu Ayaanaa fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo ajajaa mana murtiin mana hidhaatii akkuma bahaniin polisootaa federalaatiin ukkamsamanii gara hin beekamnetti fudhatamanii jiran. – Kichuu
HomeNewsAfricaOduu Gaddaa!!Koloneel Gammachuu Ayaanaa fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo ajajaa mana murtiin mana hidhaatii akkuma bahaniin polisootaa federalaatiin ukkamsamanii gara hin beekamnetti fudhatamanii jiran.
Biyyaa ajajni mana murtii hojjii irraa hin olee , biyyaa seerri itti hin kabajamnee walummaa galati biyyaa seerii dhabdumaan itti hamate tate jirti xoophiiyyaan.
Koloneel Gammachuu Ayaanaa fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo ajajaa mana murtiin mana hidhaatii akkuma bahaniin polisootaa federalaatiin ukkamsamanii gara hin beekamnetti fudhatamanii jiran.
Manni murtii federaala dhaddacha kaleessa ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi hidhamtoonni siyaasaa oromoo kan biroo yakka ittin himaataman irraa bilisaa ta’uu dhan bilisaa gadii dhisuun nii yaadatamaa.